Ụzọ atọ kachasị mma na njem Google maka gam akporo | Androidsis
Zọ ndị ọzọ kachasị mma na Google Njem maka gam akporo
Edere Ferreno | | Ngwa gam akporo
N'izu gara aga, a mara ọkwa na Njem Google ga-asị nke ọma na ahịa, ihe mere na mbido ọnwa Ọgọst a. Ọ dị ka Google enweghị afọ ojuju na ewu ewu nke ngwa ahụ. ya mere ha ekpebiela ikpochapụ ya. Ọ bụ ezie na n'oge na-adịbeghị anya anyị ahụla ka ụfọdụ ọrụ ya na-aga banye na Google Maps. N'agbanyeghị nke a, a na-amanye ọtụtụ ndị ọrụ ịchọ ụzọ ọzọ.
Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe gị, anyị ga-ahapụ gị ụfọdụ ụzọ ọzọ maka njem Google iji na ekwentị gam akporo gị. Ka ị nwee ike nweta ọrụ ndị yiri nke ngwa Google nyere anyị ruo mgbe ewepụrụ ya. Enwere nhọrọ ndị ga-emecha kwenye gị n'ubi a.
Anyị malitere na TripIt, nke ọtụtụ ndị na-ahụ dị ka ndị ọzọ kpọmkwem ọzọ anyị na-ahụ ugbu a na njem Google. Ọ bụ ngwa anyị nwere ike iji hazie njem anyị na ndoputa anyị n'ụzọ dị mfe mana dị ezigbo mma. Otu n'ime uru ya bụ na anyị nwere ike iji ya na ụdị ndoputa niile: ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụgbọ elu, ụgbọ ala mgbazinye, wdg. Na ndoputa nke ọ bụla ọ ga-egosi anyị n'ụzọ doro anya usoro njem anyị ga-agbaso n'echiche a.
Ha ga-egosi anyị ozi a nke ọma. Kedu ihe ọzọ, ha ga-enyere anyị aka ịhazi ihe niile n'ụzọ dị mfe, otu esi echetara anyị mgbe anyị ga-apụ iji rute n'ọdụ ụgbọ elu n'oge, ma ọ bụ lelee igbe anyị maka njem, na ndị ọzọ. Ọ na-ezigara anyị ọkwa ozugbo yana ozi dabara adaba. Ngwa interface dị mfe iji, na-eme ka ọ bụrụ nnukwu nhọrọ.
Nbudata ọzọ maka njem Google bụ n'efu. Na mgbakwunye, anyị nwere ike ịnweta ọrụ ya niile na-enweghị akwụ ụgwọ maka ha. Nhọrọ mara mma, nke ga-amasị gị n'ezie.
TripIt: Atụmatụ njem
Developer: Ụlọ ọrụ TripIt, Inc.
Ihe ochie maara na ubi a, ma gịnị ka anyị nwere ike ịhụ dị ka ezigbo uzo ozo na njem Google iji na gam akporo. Ọ na-enye anyị ohere inyocha ụdị ozi niile gbasara ebe ezumike anyị n'ụzọ dị mfe. Anyị nwere ike ịhụ ozi na echiche gbasara ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ na mpaghara njem nlegharị anya. Ka anyị nwee ike họrọ nke ọma nke ọma n'okwu ahụ.
Ọ na-enyekwara anyị ohere ịchọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ndoputa, nke bụ ọrụ ọzọ na-amasị ọtụtụ ndị ọrụ gam akporo. Na mgbakwunye na inwe nnọkọ, ebe anyị nwere ike ịjụ ajụjụ gbasara saịtị n'ozuzu ma ọ bụ azụmahịa. Ka anyị nweta ozi ziri ezi. A na-enyekwa anyị ohere ịhapụ echiche anyị na saịtị ndị anyị gara.
Nhọrọ ọzọ dị mma maka njem Google, nke anyị nwere ike ibudata n'efu na android. N'okwu a, ngwa ahụ nwere mgbasa ozi n'ime, ọ bụ ezie na n'ozuzu ha adịghị ewe iwe, ya mere anyị nwere ike iji ya n'enweghị nsogbu.
Onye nlekọta: atụmatụ na ndaputa
A mụrụ ngwa a site na obodo ndị na-ede blọgụ na-eme njem, nke na-enye anyị ngwa zuru oke. N'ụbọchị ya, a mụrụ ya dị ka ụdị nduzi njem, nke nwere echiche, ndụmọdụ na ọtụtụ ebe. Ọ bụ ezie na ọ na-agbasawanye ma ha na-enye anyị ọtụtụ nhọrọ na ọrụ, nke na-enye anyị ohere ịhazi njem anyị n'ụzọ kacha mma. Ebe ọ bụ na site n'inweta ndụmọdụ, ahụmịhe ma ọ bụ aghụghọ, anyị nwere ike ime atụmatụ ezumike nke ọma.
Na mgbakwunye, ọ ga-ekwe omume ịnweta ohere nkwalite ma ọ bụ mbelata ego na ndoputa gị. Nke a ga-ekwe omume site na ikenye foto, ọdịnaya ma ọ bụ vidiyo na blọọgụ gị. Nke a na-atụgharị ghọọ usoro kredit, nke ị nwere ike iji emechaa mgbe ị debere ndoputa. Ya mere enwere ike iji ya mee ihe n'echiche a, ma ọ bụrụ na ọ dị gị mma isonye na obodo a. Ị ga-enwekwa ohere na nzuko ngwa.
Nbudata ngwa a maka gam akporo zuru oke. N'ime enweghị ịzụrụ ma ọ bụ mgbasa ozi nke ụdị ọ bụla, ya mere a na-egosi ya dị ka ụzọ ọzọ dị mma na njem Google n'echiche a, nke na-amasị ọtụtụ ndị.
Tripoto: Onye nhazi njem
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Zọ ndị ọzọ kachasị mma na Google Njem maka gam akporo
Samsung ga-ebido ihe mmetụta igwefoto MP nke 108 maka smartphones echi
Etu ị ga-esi amata IMEI nke ekwentị gị n’enweghị ekwentị ahụ